पेशेवरहरू जस्तो फोटो सम्पादन गर्नका लागि सल्लाहहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / पेशेवरहरू जस्तो फोटो सम्पादन गर्नका लागि युक्तिहरू
कसरी एक पेशेवर को रूपमा फोटो सम्पादन गर्न:5सुझावहरू तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ
एक पेशेवर जस्तो फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने बारे सुझावहरूको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? सुझावहरूको लागि पढ्नुहोस् जुन शुरुवातकर्ताहरूले पनि आज लागू गर्न सक्छन् तिनीहरूका फोटाहरूको गुणस्तर सुधार गर्न।
पाँच मध्ये चार व्यवसाय सहमत हुनुहुन्छ कि प्रिन्ट मार्केटि सामग्री मदत तिनीहरूको व्यापार बढावा।
तर यदि तपाइँ एक आँखा-पकड डिजाइन तपाइँको छैन व्यापार कार्ड एक टेबल दराज मा हराउन सक्छ वा खराब - रद्दीटोकरी मा।
तपाईंको लागि फोटोहरू प्रयोग गर्दै व्यापार कार्डहरू, पत्रकहरु, र मार्केटि post पोस्टरहरु वास्तव मा एक अद्वितीय डिजाइन र ब्रान्ड शैली निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
पैसा खर्च नगर्नुहोस् शेयर फोटो पुस्तकालयहरु - आफ्नो आफ्नै संग मूल हुन फोटो। तर तपाइँ कसरी तपाइँको तस्वीरहरु सुपर पेशेवर देख्नुहुन्छ?
यो सबै सम्पादनमा छ।
कसरी सम्पादन गर्न जान्नुहोस् फोटो एक पेशेवर जस्तै यी सुपर सजिलो सुझावहरु को साथमा जो कोहीले प्रयोग गर्न सक्छन्।
कुनै प्रोफेशनलले जस्तो फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने: Easy सजीलो सम्पादन सुझावहरू सबैले प्रयोग गर्न सक्दछन्
अनुप्रयोगहरू र सम्पादन सफ्टवेयर यी दिनहरू प्रयोग गर्न यति सजिलो छ। यदि तपाईं कुल टेक्नोफोब हुनुहुन्छ भने, यी सजिलो सुझावहरूले तपाईंको छविहरूलाई कलाको कामहरूमा बदल्छ।
१. पूर्वसेट फिल्टरहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
एक प्रीसेट फिल्टर आफ्नो स्मार्टफोन स्नेप्स को एक पेशेवर मा परिवर्तन गर्न द्रुत तरीका जस्तै लाग्न सक्छ फोटो - तर पर्खनुहोस्! फिल्टरिंग को प्रक्रिया अक्सर छवि मा additives को उपयोग गर्दछ।
यो अतिरिक्त तहहरु र विस्तार कि समग्र ह्रास गर्न सक्छ सिर्जना गर्दछ गुणस्तर तपाइँको छवि को जब तपाइँ यसलाई प्रिन्ट गर्न पठाउनुहोस्। उच्च गुणस्तर तपाइँको छवि प्रिन्ट को लागी हो, तेज अन्तिम परिणाम देखिन्छ।
२. सम्पादन गर्नु भन्दा पहिले डुप्लिकेटहरू बनाउनुहोस्
फिर्ता तपाईंले कुनै पनि सम्पादन सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नु अघि तपाईंको वास्तविक फोटोहरू अप गर्नुहोस्। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं एक प्रयोग गरी सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ फोन अनुप्रयोग, स्मार्टफोन सम्पादकहरूले प्राय: मूलमा बचत गर्दछ।
तपाईंलाई आफ्नो मूल प्रतिलिपिमा मात्र पहुँच चाहिन्छ मामला तपाईं एक टन सम्पादन गर्नुहुन्छ जुन तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाईं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। कहिलेकाँही सफ्टवेयरले तपाईको सम्पादनमा बचत गर्दछ वा सीमित स und्ख्यामा अनडु कार्यहरू गर्दछ।
डुप्लिकेटहरू सिर्जना गर्नुको पनि मतलब तपाईंले छविहरू तुलना गर्न र तपाईंको मनपर्ने शैली फेला पार्न विभिन्न चमक, कन्ट्रास्ट, र रंग संतृप्ति सेटिंग्सको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Black. कालो र सेतो तह प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँको सम्पादन सफ्टवेयर तपाइँ परतहरु मा काम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, Photoshop जस्तै, एक अतिरिक्त तह जोड्नुहोस्। यसलाई एक बनाउनुहोस् कालो र सेतो तह, त्यसपछि ब्लेन्डिंग मोड 'नरम प्रकाश' मा समायोजित गर्नुहोस्।
यसले छवि कठोर देख्दछ तर नडराउनुहोस्। तपाईंले अब 'अस्पष्टता' चयन गर्न आवश्यक छ र कम्तिमा २ - - %०% बीचको स्लाइडरमा छनौट गर्न आवश्यक छ। यसले कुनै पनि छविमा उत्कृष्ट छवि परिभाषाको साथ नरम चमक सिर्जना गर्दछ।
Color. र Color्ग तापमानको साथ प्रयोग
फोटोको सेतो ब्यालेन्सले पृष्ठमा र colorsहरू कसरी पप गर्दछ भनेर प्रभाव पार्छ। यसको साथ यो परिवर्तन गर्न सजिलो छ रंगको तापमान कुनै स्लाइडर फोटो सम्पादन सफ्टवेयर।
यदि तपाइँ एक सोच्नुहुन्छ भने फोटो धेरै सेतो र नरम देखिन्छ, एक न्यानो रंग रंग थप्नुहोस्। यदि रंग अधिक संतृप्त वा प्रभावशाली लाग्छ, एक कूलर तापमान को लागी मा नीलो रंग जोड्दै यसलाई तल टोन।
यहाँ कुनै सहि वा गलत छैन, तर यसले तपाईंको शैली अनुरुप कुन रues्गहरू सिक्न समय लाग्छ। सबैमा सेतो ब्यालेन्स समायोजित गर्नुहोस् फोटो तपाइँ सम्पादन गर्नुहुन्छ र तपाइँ छिट्टै थाहा पाउनुहुनेछ कि कुन रंग तापमान स्तर तपाइँ महसुस गर्नुहुन्छ तपाइँको ब्रान्ड शैली प्रतिबिम्बित गर्दछ।
१०० लाई सबै कुरा स्लाइड नगर्नुहोस्
सबै सम्पादन सफ्टवेयर स्लाइडरहरू १०० सम्म जान्छन् तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले सबै कुरा देख्नै पर्छ।
सबै भन्दा राम्रो सम्पादन प्राय सबैभन्दा सूक्ष्म हुन्। चमक, कन्ट्रास्ट, शार्पनेस, र लक्स (वा स्पष्टता) सबै राम्रो प्रभाव को लागी सानो tweaks लिनुहोस्। यदि तपाइँ १०० को लागी केहि स्लाइड गर्न को लागी यो मूल लाई पुन: लिन को लागी प्रयास गर्न को लागी राम्रो छ फोटो विभिन्न प्रकाश अवस्था संग।
नि: शुल्क उपकरणहरू आफ्नो डिजाइन पूरा गर्न
एकचोटि जब तपाईंलाई थाहा छ कि कसरी फोटोहरू पेशेवरको रूपमा सम्पादन गर्नका लागि माथिको सल्लाहहरू प्रयोग गर्दै, तपाईं लगभग प्रिन्ट मार्केटिंग सामग्री सिर्जना गर्न तयार हुनुहुन्छ जुन मानिसहरूले मनपराउँदछन्।
बाट व्यापार कार्डहरू पोस्टरहरूमा, त्यहाँ केहि थप उपकरणहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो फोटोको साथ तपाईंको उत्कृष्ट डिजाइन पूरा गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै छन् नि: शुल्क ग्राफिक डिजाइन उपकरणहरू तपाईं बजेटमा अद्भुत मार्केटिंग सामग्रीहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ बरु तपाइँको बिजनेस कार्ड को लागी सबै भन्दा राम्रो फन्ट खोज्न को लागी फोटो लिने समय बिताउनुहुन्छ, हामी यहाँ छौं मदत। हाम्रो ग्राफिक डिजाइन सेवा तपाईंलाई विशेषज्ञ डिजाइनरहरूको पहुँच दिन्छ जसले तपाईंको दृष्टिलाई जीवनमा ल्याउँदछ! थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
Every मोबाईल फोन फोटोग्राफी सल्लाह प्रत्येक फोटोग्राफरले थाहा पाउनुपर्दछ
कसरी राम्रो इंस्टाग्राम तस्वीरहरू लिने: एक चरण-देखि-चरण गाईड →